Remove.bg: Ka saar Asalka Sawirka Madax xanuun, Dadka, iyo Waxyaabaha si bilaa cillad ah ula socda AI | Martech Zone
Hadaadan raacin Joel comm, samee. Hadda. Joel waa mid ka mid ah ilaha aan ugu jeclahay tikniyoolajiyadda. Waa qof aftahan ah, daacad ah, oo si muuqata u hufan. Ma jirto maalin i ag socota oo aanan hubinayn waxa uu soo ogaaday ee xigta… maantana wuxuu ahaa nin weyn!
Joel qof walba ha ogaado qalabka cusub ee khadka tooska ah, ka saar.bg. Qalabku wuxuu adeegsadaa sirdoonka macmalka ah si uu u falanqeeyo sawirrada dadka ka dibna si sax ah oo dhammaystiran uga saaro asalka.
Haddii aad waligaa isku dayday inaad ku sameyso Photoshop, waad ogtahay waxa khibrad xun ay tahay. In kasta oo ay jiraan fursadaha tirtiraha Photoshop, iyo xitaa kuwa ay yihiin sixir ikhtiyaariyada, weli xitaa ma dhowa. Daawashada isticmaale sawir-qaade weyn oo masixi asalka waa quruxsan cajiib.
Xitaa kuma siin doono cashar ku saabsan sida sababta oo ah waxaan rajeynayaa inaan waligey, weligay, weligey, waligey mar kale u adeegsan shaqeyntaas. Waa kan tijaabin aan hadda soo galiyay si aan u saaro.bg. Runtii waxaan rabay inaan tijaabiyo fiican - malaha isku soo dhawaansho iyo faahfaahin badan oo asal ah.
Ka Saar Asalka Sawirka koox dad ah
Oo waa kan natiijada cajiibka ah:
Mashiinka xitaa baaskiil buu ka saaray! Sawirka wax laga badalay ayaa sidoo kale waafajiyay cabirka iyo xadadka si uu udhigo sawirka muuqaal ahaan iyo taag ahaanba. Si fudud la yaab leh!
Ka Saar Asalka Taariikhda Madaxa
Ka Saar Asalka Aaladda ama Ujeeddo kale
Inkastoo Ka saar.bg markii hore waxaa loogu talagalay in laga saaro asalka madax-xanuun iyo dadka, waxay u-beddeleen algorithms-kooda si aad ugu dhajin karto wax sawir ah adeegga oo ay si nadiif ah uga saari doonto asalka. Waxaan u isticmaalay dhowr jeer tan oo si fiican ayey u shaqeysay!
Ka saar Qalabka Aaladda Sawirka & API
Qalabka Khadka tooska ah looga saaro - Wanaagsan oo loogu talagalay hal sawir qaadista iyo tijaabinta ka hor inta aan la wadin dufcad, Rqiiro.bg degelku waa dariiqa ugu badan ee soo booqdayaasha ah. Iyo aragtida muuqaalka had iyo jeer waa bilaash! Halkan waxaad sidoo kale ka heli doontaa tifaftiraha oo kuu oggolaanaya inaad beddesho midabka asalka ama sawirka.
Qalabka Desktop-ka si aad uga saarto Astaamaha - Nooca desktop-ka ee remove.bg ee Windows, Mac, ama Linux wuxuu ku siinayaa xakameyn dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dufcadda farsamaynta kumanaan iyo kumanaan sawir oo midba midka kale ka dambeeya: waa ku habboon tahay haddii aad wax ku iibineyso khadka tooska ah ama aad ku shaqeyneyso waxyaabaha ay soo saaraan isticmaalehu.
Fidinta Photoshop si looga saaro Astaamaha - Is-sharax! Ka saar sawirada gudaha softiweerka farsamaynta sawir-qaadista adigoon u baahnayn qalab dhisme. Goyn kasta oo lagu sameeyo Kordhinta waxay la timaadaa maaskaro lakab dhammaystiran oo wax laga beddeli karo oo loogu talagalay tafatirka la dheereeyay
API si looga saaro Astaamaha Sawirka - API waa xalka ugu jilicsan ee aan bixinno. Waad dhexgalin kartaa tafatirka la kordhiyay si aad si buuxda gacanta ugu hayso wax soo saarka iyo dufcadda wax soosaarka ku dhowaad aaladda shaqo kasta. Bulshadeenuna waxay horeyba u abuurtay noocyo kaladuwan oo cajiib ah oo loogu talagalay figma, WooCommerce, Sketch, iyo Visual Studio Code.
Ikhtiyaarrada qiimaha waxaa ka mid ah qorshooyinka rukunka oo u bixi sidaad u socoto.
Isku day Remove.bg Hada!
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Ka saar.bg ee maqaalkani.
Tags: aibarnaamijka android ka saar asalka muuqaalkaAPIsirdoonka macmaldrupalfigmaLinuxphotoshopkordhin photoshopka saar asalkaka saar api asalkaka saar asalka madaxaka saar asalka muuqaalkaka saar astaanta astaantadadka ka saar asalkaka saar.bgSketchdaaqadahawoocommerce